Irreechi 2018: Irreechi Hora Arsadiitti haala ho'aan kabajamaa oole nagaafi milkiin xumurameera - BBC News Afaan Oromoo
Bitaa gara mirgaatti, Abbaa Gadaa Tuulamaa duraanii Bayyanaa Sanbatoofi Abbaa Gadaa Tuulamaa Haarawaa Goobanaa Hoolaa
Oromoon miliyoonaan lakkaa'aman guutummaa Itoophiyaafi biyya alaarraa Bishooftuu Hora Arsadiitti bahanii Ayyaana Irreechaa kan bara 2018 kabajaa jiru. Ganama barii irraa eegalee Abbaa Malkaan durfamuun Abbootiin Gadaa, maanguddoonni, hayyootni, shamarraaniifi dargaggoonni Hora Arsadiitti walga'uutti jiru.
Kan kaleessa jala bultii Irreecha Hora Arsadii irratti baallii Oromoo Tuulamaa fudhatan Abbaan Gadaa Goobanaa Hoolaa, "Uummanni oromoo kan Kibba, Kaaba, Bahaafi Dhiha jirtan baga ittiin isin ga'e," jedhaniiru.
Irreecha baranaa kanarratti rogeeessi beekamaafi dura ta'aa OMN Obb Jawaar Mohaamad irratti argameera.
Kana malees, sabaafi sablamoonni kibbaa kan Sidaamaa, Gaamoofi kanneen biroo uummata Oromoo waliin irreeffachuudhaaf guyyaa jala bultii irraa eegalanii Bishootuu galaa turan.
Haadhotiin yeroo gara irreeffannaatti deemaa jiran
Oromoonni uffata aadaan faayamananii faaruufi sagalee galataa dhageessisaa sirnaan walgurmeessanii Hora Arsadiitti yaa'aan miidhaginni Irreechaa baraan akka dabalaa deemus agarsiiseera. Foolleen Gadaa kuma tokko ta'an leenjiin kennamffis namoota irreeffatan kana keessumeessuufi nagaa eegsisuudhaaf dammaqinsaafi si'annaa addaan hojjetaa jiru jedhameera. Akaakuu Irreecha lamaa-- kan tulluufi kan malkaa keessaa kan ammaa kun irreecha malkaa yeroo baayyee guutummaa addunyaatti waqtii Birraa kabajamudha.
Irreechi Hora Arsadii ammoo irreecha malkaa isa guddaa namoonni miliyoonaan irratti hirmaatanidha.
Bara kana Irrecha Hora Finfinnee kan deebiyee jalqabamu akkasumas Malkaa Ateetee Buraayyuutti kabajamu dabalatee bakka gara garaatti ni kabajama.
12 Fuulbaana 2018
Magaalaa Maqaleetti haleellaan xiyyaaraa raawwate